हारपछि पहिलो पटक बोले ट्रम्प, ‘बाइडेनले जिते’ तर...अब यस्तो हुने भयो ! -
Home News हारपछि पहिलो पटक बोले ट्रम्प, ‘बाइडेनले जिते’ तर…अब यस्तो हुने भयो !
हारपछि पहिलो पटक बोले ट्रम्प, ‘बाइडेनले जिते’ तर…अब यस्तो हुने भयो !
काठमाडौं । हामीले प्रायः सबै पहेंलो र हरीयो केरा देखेका वा खाएका छौँ । तर के तपाईंले कहिल्यै रातो केरा खानु भएको छ ? अझ भनौँ न देख्नुभएको छ ? रातो रंगको केरा अष्ट्रेलियामा पाइन्छ ।
Previous articleहे भग*वान तिहार मनाउदा हङकङमा भयो भि* षण आगो लागि,७ जनाको मि,र्त्यु, १८ जना घा*इते के भयो यस्तो हेर्नुस
Next articleतिहार मनाउन आफन्तको घर जादै थिए : भएँ एकै चि*हान…